Momba anay - Hebei Med Site Medicines Co., Ltd.
Mpinamana efatra no nanangana ny Hebei Med Site fanafody Co., Ltd. tamin'ny 2005 noho ny fanarenana indray ny orinasam-bola taloha. Ny loharanom-bola tsara avy amin'ny varotra sy ny ekipa matihanina dia tombontsoa lalandava foana. Fotoana fohy dia efa nahazoanay fanafody sy fitaovana fitsaboana any amin'ny firenena maro izahay ary mivarotra azo antoka. Izany dia miantoka ny fahafahantsika manokatra tsena bebe kokoa ary manandrana tranonkala orinasa vaovao.
Ankehitriny manana ekipa tsara ho an'ny vokatra respiratory (concentrator oksizenina, nebulizer ultrasonic, fantsom-pifamoivoizana portable, fitaovana fantsom-pandresena), kasety an'habakabaka anti-decubitus, kitapo famafazana ary kitapo urine, vokatra fikarakarana trano (themometers infraidra, thermometer amin'ny handratra an-tariby, elektronika mandehandeha. , sphygommanometer, thermometer, stethoscope, pulse oximeter), mpitsabo hafa & fiarovana (saron-tava, fonon-tanana, satroka, saron-damba, fehiloha, amponga, lambam-pandriana, lambam-baravarana, fanitarana ny vava, sns) ary fanafody fanarenana (fandriana hopitaly, tendany fanohanana, seza misy kodiarana, tohatra, tapa-kazo, sns).
Dunaliella salina no vokatra volamena ho an'ny olombelona salama ankehitriny, satria ny fifangaroany dia mifanaraka amin'ny haben'ny singa ao amin'ny ranon-dra sy ny ranon-sela, ary afaka mamelona mivantana ireo sela sy hamaha ny olan'ny fahasimban'ny sela. Mihamaro ny olona manerana an'izao tontolo izao no mampiasa azy io ary mitondra azy io ho vokatra fiarovana voalohany.
Ny mpiara-miasa aminay lehibe indrindra-Inner Mongolia Lantai Industrial co., Ltd dia malaza amin'ny fatrany dunaliella madio sy voajanahary avo lenta eto amin'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny teknolojia avo lenta, ny vokatra salali Dunaliella dia manintona mpividy bebe kokoa.
2019-nCoV niantraika ny ainay nanomboka ny Janoary 2020, ny akanjo fitaovan-tsofina amin'ny orinasa kami dia nampiasaina tany Wuhan ary mandray andraikitra lehibe ao. Ankehitriny kitapo fanaovana fitiliana haingana, saron-tava vita amin'ny fitsaboana, saron-tava fandidiana, solomaso miaro, fitafy fiarovana, fonon-tanana ...... dia natolotra haingana any amin'ny firenena hafa amin'ny alalan'ny sppeed haingana.
"Ny kalitao aloha, serivisy aloha, asa mahomby, fiainana sambatra" no katsahinay.
Safidiho eto, ary mahafa-po eto ......